Areti-mifindra bubonic: namoaka fampitandremana momba ny dia any Mongolia ny masoivohon'ny fizahan-tany any Russia
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Areti-mifindra bubonic: namoaka fampitandremana momba ny dia any Mongolia ny masoivohon'ny fizahan-tany any Russia
Namoaka fampitandremana manokana ho an'ireo mpizahatany mandeha any Mongolia ny masoivohom-pirenena Federaly misahana ny fizahan-tany any Rosia taorian'ny tranga roa nahitana areti-mandringana in-droa tavela tao amin'ny firenena.
Rosiana roa no matin'ny areti-mifindra be, ary voalaza fa tratran'ny otrikaretina marmot voadona. Ireo mpivady avy any Siberia dia inoana fa nifandray tamin'ny olona 158 farafaharatsiny maty. Ireo olona ireo dia natokana ho karana.
Nilaza ny masoivoho fizahan-tany fa ny fahafatesana dia voarakitra ao amin'ny faritany Mongoliana atsimo ao Bayan-Ulgii, hoy ny Sampan-draharaha Federaly Rosiana misahana ny fiarovana ny mpanjifa sy ny fiahiana ara-tsosialy (Rospotrebnadzor).
Nangataka ireo mpizahatany ity masoivoho ity mba handray an-tanana izany fampahalalana izany rehefa mikasa ny hanao fitsidihana any amin'ny faritra izy ireo.
Rospotrebnadzor dia nandray fepetra hisorohana ny aretina any amin'ny faritra manamorona ny sisintany, ao anatin'izany ny fifehezana ny quarantine ary maherin'ny 90 isan-jaton'ny mponina no vita vaksiny. Ity masoivoho ity koa dia mifampiresaka amin'ireo tobim-pahasalamana any Mongolia.
Tsiambaratelo ao Espana: divay Txakoli
Fandraisana hotely: fifanarahana hotely 43,000 tokana manerana ny tsenan'i Amerika